VOLY FANONDRANA - AFA-PO NY MPAMBOLY : Tafakatra 800 000 Ariary ny kilaon’ny lavanila
Tsara hatrany ny vidin’ny lavanila vonona haondrana eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. 800 000 Ariary na mety mbola ho lafo noho izany aza ny vidiny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. 11 janvier 2017
Ny kalitao kosa latsaka kely noho ny tamin’ny taona 2015 ny hatsarany na dia lafo noho ny tamin’ny teo aloha aza ny vidiny tamin’ny taona 2016 iny. Hentitra hatrany anefa ankehitriny ny fanaraha-maso ataon’ny minisiteran’ny Varotra eny amin’ireo mpandraharaha mpanondrana lavanila, indrindra any Sava sy Analanjirofo. Na izany aza, misy ihany ny maningana satria betsaka loatra ny halatra lavanila ka nahatonga ity vokatra fanondrana ity notazana mialoha ny fotoana.
Afa-po kosa ny mpamboly sy mpanondrana lavanila tamin’ity taona ity na. Manahy aza izy ireo fa mety hitotongana ny vidina lavanila amin’ny taona ho avy.